लामावासीको गुनासो : टावर आएन, भोट केमा हाल्ने ? | ईमाउण्टेन समाचार
वैशाख २७, २०७९ पढ्न ५ मिनेट
मुगु । सदरमुकाम गमगढी बजारदेखि झण्डै दुई/तीन दिन पैदल यात्रा हिँडेर डोल्फु पुगिन्छ । जिल्लाको पूर्वी करान भेगमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिका-१ स्थित उक्त गाउँमा लामा समुदायको बाहुल्यता छ । डोल्फु गाउँमा अन्य जातिभन्दा लामा समुदायका मानिस बस्छन् ।
उक्त गाउँमा ४६ घरधुरी रहेका छन् । स्थानीयको मुख्य पेसा यार्सागुम्बालगायत विभिन्न प्रकारका जडीबुटी संकलन गरी बिक्री गर्नु रहेको छ । लामा समुदायले घर पालुवाको रूपमा हिमाली क्षेत्र पाटन तिर अवस्थित चौरी, घोडाघोडी पाल्ने गरेका छन् । यो क्षेत्र भनेकै मुगु जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा पर्छ । यो स्थानमा चिसो बढी हुन्छ ।
दुःख पोख्दै उनले डोल्फु गाउँ त मुगु जिल्लाको अन्तिम गाउँ हो । यो गाउँको छिमेकी देश चाइनासँग सीमा जोडिएको छ । तर, डोल्फुवासीको ठूलो समस्याको रूपमा टेलिफोनको टावर नहुनु रहेको उनले बताए । पहिले हेलो नेपालको टावर भए पनि बन्द भएको धेरै वर्ष भएको उनी बताउँछन् । टाढा रहेका आफन्तसँग कुरा गर्नका लागि करिब एक घण्टा हिँडेर नोरकी लेख डाँडामा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
२०७४ सालको तीनै तहको चुनावमा यहाँका नेताहरूले गाउँमा समस्या समाधान गर्ने भन्दै भोट मागेको भए पनि अहिलेसम्म समस्या ज्युकात्यु रहेको कार्मारोङ्ग गाउँपालिका-१ का वडा सदस्य घोन्बु लामा (तामाङ) बताउँछन् । उनी भन्छन् फेरी ५ वर्ष पछि स्थानीय तहको चुनाव आए छ , टावर छैन , कुरा गर्न पाएको छैन , भोट के मा हाल्ने हो , कस्तो हाल्ने हो , कसलाई हाल्ने हो ? भनेर नेताहरू लाई ब्यङग्य गरेका छन् । अहिले पनि उनीहरू सञ्चार क्षेत्र बाट वञ्चित भएका छन् ।
देश/समाज‐मा वर्गिकृतmugu news, mugu news nepali, भोट केमा हाल्ने ?, लामावासीको गुनासो : टावर आएन
पर्यटकको पर्खाइमा मुगुका सामुदायिक होमस्टे
मुगुमा शनिवारदेखि एक हप्ता विद्युत अवरुद्ब